Kulanka 31-aad ee Golaha Shacabka oo maanta looga dooday Miisaaniyadda 2019-ka – Kalfadhi
December 29, 2018 December 29, 2018 Kalfadhi
Golaha Shacabka ayaa ka dooday Miisaaniyadda 2019-ka ay ku shaqeyn doonto Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS), kaas oo ay maanta marsiiyeen Aqrinta Koowaad. Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka ayaa War-bixinta Miisaaniyaddaas si kooban uga hor aqriyey Golaha. Guddoomiyaha cusub ee Guddigaas, Maxamuud Siraaji, ayaa ka codsaday Xildhibaannada in ay si dhaqso ah u ansixiyaan Miisaaniyadda.
“Waxaan codsaneynaa in la meel mariyo Miisaaniyadda Dalka ee 2019-ka” ayuu yiri Xildhibaan Siraaji. Waxa uu sheegay in waqtiga ay Miisaaniyaddaan haysato, si loo ansixiyo, ay aad u yar tahay. “Miisaaniyadda 2019-ka waxaa ka dhamaanaya waqtiga” ayuu yiri Siraaji. Wuxuuse Xildhibaanku sheegay in marka Miisaaniyaddan loo fiiriyo kuwii ka horeeyey ay wax xoogaa koror ah ku jiraan.
Xildhibaan Dr. Cilmi Maxamed Nuur oo ka tirsan Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka ayaa, isaga oo war-bixinta miisaaniyadda ka hor aqrinaya Golaha, waxa uu sheegay in ay aad kooban tahay kaalmada dibadda Soomaaliya ka imaaneysa ee lagu kabi karo Miisaaniyadda Sanadka soo socda. “Kaalmada lagu tashan karo ee tooska ah waa kaalmada laga keeno Dalka Turkiga” ayuu yiri Dr. Cilmi.
Xildhibaan Cabdirashiid Xidig ayaa sheegay in, sida uu horay uga dhawaajiyey Guddiga Maaliyaddu, aysan miisaaniyaddan haysan waqti uu dooddeedu Goluhu geliyo. “Miisaaniyaddaan waxba uma harin. Sanadkii waa dhamaaday. Maadaama ay Miisaaniyaddu ka mid tahay waxyaabaha qaranka muhiimka u ah, waana in aysan dib uga dhicin waqtigii loogi talogalay” ayuu yiri Xildhibaan Xidig. “Waxaan qabaa inaan Miisaaniyaddaan ansixino, anaga oo ka duuleyna waqtiga naga lumay” ayuu sii raaciyey hadalkiisa.
Xidig, waxaa hadalkaas ku raacay Xildhibaan Sadiiq Warfaa, oo sheegay in haddii aan Miisaaniyaddan la ansixin, intaanu curan sanadka soo socda oo dhalan doona 2 maalin kadib, ay Dowladnimada Soomaaliya istaagi doonto. “Aan ansixino miisaaniyadda inta uu dalku geli lahaa xaalad istaag ah” ayuu yiri Xildhibaan Warfaa, oo intaas sii raaciyey in ay Golaha la gudboon tahay inuu ka fikiro inuusan waayin kalsoonida shacabka.
Hase ahaatee Xildhibaan Guuleed Caydaruus ayaa sheegay inuu Goluhu noqonayo qeyro-masuul hadduu meel-mariyo wuxuusan aqrin, hubinna in ay sharci tahay taas oo uu sheegay iney u haahan tahay waqti ku filan. “Waxaan dareemeynaa in aad degdegeysaan, haddii aad maanta keentaan oo aad rabtaan in horay laga ansixiyo” ayuu yiri Xildhibaan Caydaruus. “Wasaradda waxaa ku maqan laba xisaab-xir” ayuu Xildhibaanku hadalkiisa sii raaciyey.
Guddoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka, Mahad Cabdalla Cawad, oo qeybtii dambe kulanka Golaha shir-guddoominayey, ayaa sheegay inuu Golaha mar kale arrinta miisaaniyadda u kulmi doono berri, si loo dedejiyo ansixinteeda. “Guddiga iyo Wasaaradda Maaliyadda ayaa su’aalihiina dib u eegi doona, waxayna noo noqon doontaa maalinta berri ah” ayuu Guddoomiye Cawad ku yiri Xildhibaannada.
Puntland oo Masuuliyiinta Dowladda Federaalka ka mamnuucday deegaannadeeda